အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback]
Myanmar IT Resource Forum » TEMPORARY PLACE » » Guest Zone » အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback]
1 အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 25th July 2009, 6:11 pm
ကျနော်ကတော့ ဒီဖိုရမ်မှာ အသင်းမဝင်ရသေးပါဘူး....
ဒါပေမယ့် ကျနော် ဒီဖိုရမ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တစ်ခုတော့ အကြံပေးချင်ပါတယ်...
ဒီဖိုရမ်မှာ ဆွေးနွေးဖို့ ခေါင်းစဉ်တွေကို Admin တွေက ဖွင့်ထားပြီးတော့ ဆွေးနွေးချက်တစ်ခုမှ မရှိတာတွေ့နေရပါတယ်...
အဲဒီ့ကိစ္စဟာ ဖိုရမ်ကို ရုပ်ဆိုးစေပါတယ်....
2 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 26th July 2009, 7:45 am
ဟုတ်ကဲ့ ပါ ဗျာ .. အခု လို အကြံ ပေးသွားတာကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ် .. ကျွန်တော် တို့ ဖိုရမ် ကလည်း အခု မှ တိုးတက်စ ဆိုတော့ဝင်ပြီးတော့ ဆွေးနွေး မဲ့ လူတွေ မရှိသေးတဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါတယ် ခင်ဗျာ .. ကျွန်တော် တို့လည်း အဲဒီ့ ဘက်တွေ မှာ ၀င်ပြီးရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ .. မိတ်ဆွေ အနေနဲ့ လည်း သိထားတာလေးတွေ ကို လာရောက်ပြီး မျှဝေ ပေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါတယ် ...
3 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 26th July 2009, 8:42 am
4 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 26th July 2009, 1:04 pm
ကိုထက် ပြောသွားသလိုဘဲ.. ကျနော် တို့ ဖိုရမ်က တိုးတက်ဆဲ ကာလ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ဆွေးနွေးချက်က မစုံလင်သေးတာတော့ အားနည်းချက်လို့ဆိုရမှာပါ...
ဒါပေမယ့် အားလုံး ၀ုိင်းဝန်းကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်တော့ အမြန်ဆုံးတိုးတက်လာမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ပါတယ်..
5 ကိုကောင်းစေ၏အကြံပြုချက်အား ဆွေးနွေးခြင်း on 19th August 2009, 4:51 pm
ဖိုရမ်တိုင်းမှာ Admin များက လိုအပ်တဲ့ ကဏ္ဍအလိုက် Topic များအားစတင်ဖော်ဆောင်ရပါတယ်။
ကိုကောင်းစေပြောတဲ့သက်ဆိုင်ရာတော့ပစ်တွေမှာ ပို ့များမရှိခြင်းများဟာ ဖိုရမ်ရဲ ့သက်တမ်းနဲ ့လည်းဆိုင်ပါတယ်။
တည်ထောင်စမှာ အားလုံးပြီးပြည့်စုံဖို ့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး ဒါကိုနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်...
ဒီဖိုရမ်တွင်းက မန်ဘာများကလည်း မိမိဖိုရမ်တိုးတက်ရေးအတွက် တတ်နိုင်သမျှ စွမ်းဆောင်ကြမှာ ဖိုရမ်တည်ထောင်စဆိုတော့ကာ နားလည်ပေးကြဖို ့နဲ ့
မိမိမှာရှိတဲ့ အသိပညာအတတ်ပညာများကို မြန်မာဖိုရမ်များ တိုးတက်ရေးအတွက် တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
6 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 19th August 2009, 8:14 pm
7 မျက်စိရှု့ပ်လို ့ပါ. on 29th August 2009, 10:53 am
ကျွန်တော်ဒီကိုဝင်ကြည့်တာ နဲနဲ အမြင်ရှုပ်နေသလားလို ့...
တခြားဖိုရမ်တွေနဲ ့မတူဘူးလို ့ထင်တယ်..အရောင်တွေနဲ ့Signature တွေ နဲ ့Avator တွေ က ကြီးလွန်းအားကြီးနေတယ်..
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် New User တွေ အတွက်သင့်တော်မည်လို ့ထင်မိပါကြောင်း..
8 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 29th August 2009, 4:02 pm
Signature တွေကို တော့ ဖြုတ်တော့မှာပါ...
Avatar တွေကိုလည်း ချုံ့ကြည့်မလို့ စိတ်ကူးနေပါတယ်။
9 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 20th October 2009, 1:17 pm
link တွေ ကောင်း ကောင်း မမြင်ရလို.ပါ
select လုပ် မှ မြင် ရ လို.
ကြည်.လိုက် တာနဲ. မြင်အောင် အရောင် လေးပြောင်းပေးပါ
အ ကြံ ပြုတာပါ
10 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 20th October 2009, 1:24 pm
ဟုတ်ကဲ့ ပါ ဗျာ .. ခုလိုအကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဗျာ ..
11 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 20th October 2009, 5:51 pm
ကျနော်ကလည်း စနေ ၊ တနင်္ဂနွေမှ ကောင်းကောင်းအားတဲ့သူဆိုတော့ ဖိုရမ်ပြင်ရင် ညဘက်ဘဲ ခဏလောက် ၀င်လာနေရလို့ပါ။
အရင် တန်းပလိတ်ပြန်ထည့်နိုင်အောင်လည်း ကြိုစားနေပါတယ်။
လောလောဆယ်တန်းပလိတ်ကိုလည်း ကြိုက်ရင်တော့ ဒီအတိုင်းထားပြီးတော့ ပြင်စရာရှိတာ ပြင်ပေးပါ့မယ်။
အားလုံး နည်းနည်းလောက် သည်းခံပေးပါနော်။
12 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 22nd February 2010, 12:41 pm
ပြင်သင့်ပါတယ် forum ko simple form pyaw tar par [color=darkred][b]m sorry ko samurai[/color]
အကြံပေးတာက သေချာကြည့်ပြီးအကြံပေးပါခင်ဗျာ ။ ဘာကိုဆိုလိုမှန်းမသိအောင် မရေးပါနဲ့
အားလုံးရဲ့ အကြံပြုချက်ကို အလေးထားပြီးဖတ်နေပါသောကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဘက်ကို ကူညီပြီး သေချာအကြံပေးလိုပါတယ် ။
Last edited by zawzaw on 23rd February 2010, 1:19 pm; edited2times in total
13 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 22nd February 2010, 4:23 pm
14 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 27th February 2010, 7:02 pm
အချို့ Topic တွေ က inactive ဖြစ်နေတာ တော် တော် ကြာ ပြီ... forum က topic များ ပြီး inactive ဖြစ်နေတာ အရုပ်ဆိုးပါတယ်... အမြင်လဲရှုပ် ပါ တယ်
ပြန်ဖြုတ်သင့် တာ ပြန်ဖြုတ်စေလိုပါတယ်
15 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 27th February 2010, 7:29 pm
zay wrote: အချို့ Topic တွေ က inactive ဖြစ်နေတာ တော် တော် ကြာ ပြီ... forum က topic များ ပြီး inactive ဖြစ်နေတာ အရုပ်ဆိုးပါတယ်... အမြင်လဲရှုပ် ပါ တယ်
ဟုတ်ပါတယ်။ Founder တွေကို ပြောဖူးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Seminar News တွေပေါ့။ ဖျက်လိုက်ရင် တင်ထားတဲ့ Member ရဲ ့Post အရေအတွက်ကို ထိခိုက်သွားနိုင်လို ့ပါတဲ့။
16 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 27th February 2010, 7:40 pm
Post အရေအတွက် ထိခိုက်တယ်ဆိုတာထက် အကျိုးရှိမယ် ဒါပေမယ့် Inactive Post တွေကို ဖျက်မယ်ဆိုရင် New member တွေဘဲ ထိခိုက်မှာနော်.။
ဖိုရမ်မှာ Topic ပေါင်း 1933 ခု ရှိပြီးတော့ ၊ ပြန်စာစုစုပေါင်း (Post Reply) - 10262 ခုု ရှိနေပါတယ်။ (အဲဒါတွေအကုန်လုံးကို အစ်ကို့အနေနဲ့ ဖတ်ဖူးပါသလား?)
ကဲ ကျွန်တော်တို့က ဖျက်လိုက်ပါပြီတဲ့ အစ်ကို မှမဟုတ်ဘူး ၊ တခြား New Member တွေအနေနဲ့ ဒီလို Post တွေကို မတွေ့နိုင်တော့ဘူးလေ။
Inactive (No Reply) Post တွေရှိနေပေမယ့်လည်း အဲဒီ့ Post တွေကို ဖတ်တဲ့သူကတော့ ရှိပြီးသားပါ။
နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ ကို zay ၊ Blog ရေးဖူးလားမသိဘူး?? ဒါမှမဟုတ် Blog တွေကော ဖတ်ဖူးပါသလား။
ဖတ်ဖူးမယ်ဆိုရင် Archive ဆိုတာ ဘာလို့ထားတယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ရေးလိုက်ဖျက်လိုက် လုပ်နေမယ်ဆို ၊ ဘာလို့ရေးနေတော့မလဲ။
နောက်ထပ် ဥပမာ ပေးရမယ်ဆိုရင် wiki မှာကော ဖျက်ပစ်တာမြင်ဖူးပါသလား။
စံချိန်တင် စာအုပ်တွေမှာကော စံချိန်သစ်တင်နိုင်ရင် စံချိန်ဟောင်းရေးထားတဲ့ စာရွက်ကို ဖြဲပစ်ပါသလား။
Anyway Thanks for da comments bro.
တခြား အကြံပြုတာတွေလည်း လက်ခံပေးပါမယ်။ (တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ပြန်လည် ရှင်းပြတဲ့အခါ တချို့ စကားလုံးတွေမှာ အနည်းငယ် စိတ်ခုစေသွားရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ ဘာသဘောမှမပါပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း ဖြေရှင်းသင့်တာ ပြန်ပြီး ဖြေရှင်းတဲ့သဘောပါ)
17 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 27th February 2010, 7:43 pm
very good explanation, $yko
18 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 28th February 2010, 1:34 pm
ကောင်းစေ wrote: ကျနော်ကတော့ ဒီဖိုရမ်မှာ အသင်းမဝင်ရသေးပါဘူး....
အကြံပေးတာကောင်းပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူတွေ တည်ထောင်သူတွေက ခေါင်းစဉ်ဖွင့် ထားပြီးမရေးတာ ကတော့ ဘယ်သူမဆို
အကုန်လို်က်ပြီး မရေးနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုဖွင့်ပေးထားတဲ့ အတွက် ရေးနို်င်သူရှိရင် ရေးလို့ရတာပေါ့။ ခေါင်းစဉ်တွေ မရှိရင် ရေးချင်ရာဝင်ရေး
ရင် ရှာရတာခက်မပေါ့။ ခုချိန်မရေး နိုင်သေးကြပေမယ့် အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ တစ်ချိန်ချိ်န်မှာ ရေးမှာပါ။ ခေါင်းစဉ် ဖွင့်ပေးထားတာကို်လညး်
လက်ခံရမှာပါ။ ကောင်းပါတယ်။ အဖွဲစည်းလုံးမှုကို ထိခိုက်စေမယ့် မည်သည့်စကားလုံး ကိုမဆို ကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ပါဘူး။ :cry
19 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 28th February 2010, 2:28 pm
အကြံပေးတာကိုတော့ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်... မတူညီတဲ့အမြင်တွေကို လက်ခံတယ်၊ စဉ်းစားပေးတယ်ဆိုပေမယ့် ကျနော်တို့ကတော့ အခုပေးတဲ့အကြံကို လက်မခံနိုင်တာစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ .... လက်မခံရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့ ကျနော်တို့ဖိုရမ်က $ƴǩǾ ရှင်းပြပေးပြီးသားဖြစ်လို့ ထပ်ပြီးရှင်းစရာမလိုတော့ပါဘူး... နောက်ထပ်ပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်...
20 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 28th April 2010, 5:22 pm
New User တွေ အတွက်.... ဒီဆိုက်မှာ...
လွယ်လွယ်နဲ့ ရင်းနှီးမှု မရတာတွေ့ရပါတယ်....ဥပမာ ပြောရရင် မီးချောင်းဝယ်ဖို့လာတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ.. ဆိုင်လည်းရောက်ရော...အမျိုး အစား အများကြီးကိုတွေတဲ့ အခါ ဘာ ကိုဝယ်ရမှန်းမသိတော့ပဲ ရှုပ်ထွေး သွားစေသလိုပါပဲ........လူသုံးများတာလောက်ပဲ ထုတ်ပြပြီး
ကျန်တာတွေကို ဘီရိုထဲမှာ ပဲပြထားမယ်ဆိုရင်.... ပိုပြီး လွယ်လွယ်ကူကူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျ...
စည်းကမ်းတွေ လည်း နည်းနည်း ရှုပ်ထွေးတယ်ထင်မိပါတယ်.......
အိုင်တီ ကို ၀ါ သနာပါလို့ ခု မှ အွန်လိုင်း တတ်သုံးပြီးလေ့လာမယ့် သူ အတွက်...
ဥပမာဗျာ Code ခံပြီးရေးပါလို့ ပြောပြရုံ အပြင် ပုံလေးနဲ့ ပါတွဲ ပြနိုင်မယ်ဆို ရင်...
အဆင့်အတန်း စုံက Member တွေ အတွက် အားကိုးစရာဖြစ်လာမှာပါ...
ပြီးတော့ မြန်မာ လူမျိုး တွေ အတွက် အဓိ က ထားတာ ဖြစ်လို့ တတ်နိုင်သလောက်မြန်မာလို ပဲ
ဥပမာဗျာ...လွယ်လွယ်နဲ့ Familiar မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာထက်..
လွယ်လွယ်နဲ့ ရင်းနှီးမှု မရတာတွေ့ရပါတယ်....လို့ပြော လိုက်တာက ပိုရှင်းလင်းစေမယ်ထင်ပါတယ်..
အဲ ကျွန်တော်ပြောတာမှာ အမှားပါခဲ့ရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပေးပါဗျာ...
21 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 29th April 2010, 6:19 pm
အကြံပေးတဲ့ ကို Browser ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးအခြေအနေရောက်အောင် အားလုံးရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုလိုပါသေးတယ်။
22 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 29th April 2010, 6:58 pm
ခုနက အလျင်စလို Reply ပြန်ပေးမိသွားတယ်။
အကြံပေးတဲ့သူ စိတ်ကျေနပ်အောင်လို့ အခု တစ်ချက်ချင်းပြန်ပေးမယ်နော်။
firef0xxx wrote: New User တွေ အတွက်.... ဒီဆိုက်မှာ... လွယ်လွယ်နဲ့ ရင်းနှီးမှု မရတာတွေ့ရပါတယ်....
အစ်ကိုပြောတာက New User တွေနဲ့ ရှိပြီးသားလူတွေနဲ့ လွယ်လွယ်မရင်းနှီးဘူးပြောတာတော့ မဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်။
ဘာလို့ဆို ဥပမာလေးကို ကြည့်မိလို့ပါ။ အကယ်လို့ ဟုတ်နေလည်းပြောနော်။ ကျွန်တော်က မရှင်းလို့ ပြန်မေးကြည့်တာပါခင်ဗျာ။
firef0xxx wrote: ဥပမာ ပြောရရင် မီးချောင်းဝယ်ဖို့လာတဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ.. ဆိုင်လည်းရောက်ရော...အမျိုး အစား အများကြီးကိုတွေတဲ့ အခါ ဘာ ကိုဝယ်ရမှန်းမသိတော့ပဲ ရှုပ်ထွေး သွားစေသလိုပါပဲ........လူသုံးများတာလောက်ပဲ ထုတ်ပြပြီး ကျန်တာတွေကို ဘီရိုထဲမှာ ပဲပြထားမယ်ဆိုရင်.... ပိုပြီး လွယ်လွယ်ကူကူရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျ...
အဲဒီ့လိုလုပ်ရင်လည်း Love at First Sight လိုပေါ့။ Great Impression at First Sight ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုနေရာချရမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အဖြေမရသေးဘူးဗျ။
MITR 2.0 မှာတော့ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်။
အစ်ကိုပြောသလိုပေါ့ ဘီရိုထဲ ထည့်သိမ်းသင့်တာ ပြန်သိမ်းလိုက်ဦးမယ်။
ဘီရိုသော့ကတော့ Member တွေ ဖိုရမ်နဲ့ ရင်းနှီးလာလေ သူ့ဟာသူ ရလာလိမ့်မယ်။
firef0xxx wrote: စည်းကမ်းတွေ လည်း နည်းနည်း ရှုပ်ထွေးတယ်ထင်မိပါတယ်.......
စည်ကမ်းကတော့ ကျွန်တော်လည်း ပါသင့်ပါထိုက်တယ် ထင်တာ အကုန်ထည့်ထားတာ။
ဒါပေမယ့် စည်းကမ်း မထားပြန်ရင်လည်း သိတဲ့ အတိုင်းလေ...
တတ်နိုင်သလောက် တော့ Tutorial တွေ ဘာတွေ ဆိုရင် မြန်မာလိုရေးကြတာပါဘဲ။
တစ်ချို့ Reply တွေမှာတော့ shift+ctrl နှိပ်ဖို့ မေ့နေလေတော့ ဒီအတိုင်း simple sentence လေးတွေနဲ့ simple meaning လေးတွေနဲ့ ရေးကြတာပါ။
အဲလိုကတော့ IT သမားတိုင်း ထည့်ပြောမိတတ်ကြပါတယ်။
ဘာလို့ဆို IT အသုံးအနှုံးတွေ ကြားညှပ်သုံးရင်းက အဲလိုဖြစ်တတ်တာပေါ့။
နေ့စဉ် နှုတ်ပြောတွေမှာလည်း ကျွန်တော်တို့လူမျိုးရဲ့ အကျင့်လိုဖြစ်နေတာကတော့ ကျွန်တော်လည်း ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမယ်မသိတော့ဘူး။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အစ်ကို့ရဲ့ အမြင်လေးကို ခုလိုသိရတာတော့ ကျေးဇူးပါဗျာ။
23 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 10:35 am
ဒီဆိုက်လေးကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်လို့ တစ်ခြားဆိုက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်တာ
ဖြစ်ပါတယ်... အများစုဟာ ပြင်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်.... နောက်ပြီး တော့ အိုင်တီဆိုင်ရာ အမေးအဖြေကဏ္ဍကိုလည်းမြင်သာတဲ့နေရာလေးမှာ ထားပေးစေချင်ပါတယ်.....ဖြစ်နိုင်ရင် Facebook
မှာလည်း အဖွဲ့ တစ်ခု အဖြစ်ထားရှိစေချင်ပါတယ်....
24 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 5:32 pm
firef0xxx wrote: ကျွန်တော်အပေါ်မှာအကြံပြုထားတာတွေက
IT Help-desk section is already at the very first position on the Forum.
Burglish Editor >>> အခု Linux ပေါ်ရောက် နေလို့ မြန်မာလိုရေးလို့ အဆင်မပြေဘူး။
25 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 8:23 pm
Can I celebrate my post here,arespectful Admin?
I've used many forums but never beenaMyanmar forum member especially because I rarely type in Myanmar. It'd seem difficult for me to type so. And plus, I usually think that the burmese sites are justanothing.
But, that thought now totally changes once I found this Forum. It'sacollection of very precious treasure for the IT youths especially for who's not an English expert. He or she can easily read and reply posts without hesitation or thinking how to write in English. Moreover, this must be the thing for our Myanmar youths.
So, admin and other members,
Let me tell you all,
I'm REALLY PROUD of being this MYANMAR IT RESOURCE FORUM member!!!!
Besides, there would be not as easy task for ADMIN as much I think. Whatever, Admin, Fighting..!!! XP LOLZ
26 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 9:01 pm
One thing is that replies are not quick enough for me to log in longer here.
27 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 9:12 pm
Cherry May wrote: Suggestions & Feedback?
hee hee. Thanks, I finally knew that our members are proud of being our Member.
Cherry May wrote: One thing is that replies are not quick enough for me to log in longer here.
there is quick reply below the post. you can write it there.
28 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 9:18 pm
Yeah, it'd be good if the member interact each other quickly. I mean if they are replying posts one after another not only for IT but also for personal frdship (or something like that), then the forum would be become alive. Am I too greedy or demanding, Admin?
29 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 9:23 pm
Cherry May wrote: Yeah, it'd be good if the member interact each other quickly. I mean if they are replying posts one after another not only for IT but also for personal frdship (or something like that), then the forum would be become alive. Am I too greedy or demanding, Admin?
You mean the interaction between Members.
No, you are not greedy. I also greedy.
So, we are greedy person, let's create the best Active and best Resource Forum for our Country.
btw, you can call me as your firend or brother. I'm also 18 (exactly 18 years and9days).
30 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 9:38 pm
$ƴǩǾ? Can I call YOU "SyKo" ? Sorry, if this is out of topic.
Well, it'd be difficult for members to be able to log in for long time here; since some of them can't access all the time for some reasons. I've faced the same problem.
When in some forum, there're only 10 of members inclusive of me. But, every each hour, we usually talk and talk and talk. Sooner, the time came we went busy with our school staff. And now the forum is died. No new reply. I feel sad.
So, I do hope all the members could be able to share their IT knowledge every second!!!!
31 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 9:46 pm
Oops! Every Second!! (you want more active than me . I lost you. )
32 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 9:52 pm
I want much more activity Bcuz I like chatting. LOLz
Oh , yes, why not adding RPG ? Roll play games just like an IT expert family house in this forum. Uhh.. I can consider it'd be difficult for you tho' .
33 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 10:00 pm
eik! Adding RPG?
ok, I will note this suggestion and try to find out that I can do it or not.
34 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 10:06 pm
$ƴǩǾ, it's on you and so dun try so hard. It's justasuggestion..
35 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 30th April 2010, 10:14 pm
I am happy to implement my members suggestions done.
36 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 22nd May 2010, 3:43 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-05-04
37 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 22nd May 2010, 5:34 pm
FireFox wrote: ဆရာမော့ဒ်တို ့နှင့်လူကြီးများခင်ဗျာ
ဘယ်လို Testing ခန်းကို ဆိုလိုတာလဲခင်ဗျ။ ဘာအတွက်လဲဆိုတာကောပဲ။
ကျွန်တော်သဘောမပေါက်လို ့ပါ။ သေချာရှင်းပြပေးပါလား။
38 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 18th September 2010, 4:34 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-08-05
ဒီ post နဲ့ဆိုင်မဆိုင်တော့မသိပါဘူး၊ ညီမရဲ့ ကွန်ပျုတာမှာ Truth ဆိုတဲ့ pdf ်file တစ်ခုက desktop မှာတင်နေပါတယ်
အဲဒါ ဘယ်လိုမှဖျက်လို့ မရပါဘူး ။ အဲဒါ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ဖိုင် တစ်ခုပါ။ ညီမရဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ အရမ်းရှုပ်နေပါတယ်။ ဘယ်လိုဖျက်ဖျက် desktop မှာပဲပေါ်နေတယ်
39 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 20th September 2010, 11:57 am
ွှTruth ဆိုတဲ့ pdf ဖိုင်လေးပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ iqtest.exe ဆိုတဲ့ virus ရှိနေလို့ပါ။ အရင်ဆူုံး iqtest.exe ဆိုတဲဲ့ virus ကိုအရင်သတ်ပါ။ အဲ့ဒီ virus ပုံလေးက chipset ပုံလေးနဲ့တူပါတယ်။
spyhander's spyware scanner နဲ့အရင်ဆုံးရှင်းလိုက်ပါ။ ပြီးမှ pdf ဖိုင်လေးကိုဖျက်လိုက်ပါ။
40 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 20th September 2010, 1:35 pm
thet ko oo wrote: အကိုတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့ပါ
Task manager မှာအရင် IQTest.exe ဆိုတာကို End Process လုပ်ရပါမယ်။ ပြီးရင် IQTest.exe ကိုဖျက်လိုက်လို ့ရပါပြီ။
41 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 26th September 2010, 9:08 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-08-02
Truth.pdf ဆိုတာက နိုင်ငံရေးသမားတွေရေးထားတဲ့ exe file လေးပါ။ အဲဒါ ကို လုံးဝဖျက်ချင်ရင်တော့ windows file ကနေသွားဖျက်မှရပါတယ်။။ C:/windows/system32 မှာ IQtest.exe ဆိုတာရှိပါတယ်။ အဲဒီနေရာကဖျက်မှ လုံးဝပျက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
42 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback] on 25th February 2012, 10:10 am
ကျွန်တော်တခုလောက်အကြံပေးချင်ပါတယ် ဒီဖိုရမ်မှာ ဇော်ဂျီရော မြန်မာ၃ ရောပါ ရေးနေကြတော့ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတာတွေ့ရင် Browser မှာ ဇော်ဂျီလိုက်ပြောင်း မြန်မာ၃ နဲ့ရေးထားတာတွေ့ရင်လဲ အဲဒီလိုပေါ့နော် လိုက်ပြောင်းနေရတယ်ခင်ဗျ။ Site ရဲ့တနေနေရာမှာ ဇော်ဂျီနဲ့ မြန်မာ၃ကို အလွယ်တကူပြောင်းလို့ရအောင်လေး လုပ်ပေးရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ မြန်မာ၃ ဖြစ်ဖြစ် ဇော်ဂျီဖြစ်ဖြစ် တခုဘဲသုံးလို့ရအောင်လုပ်ထားရင်ပိုကောင်းပါတယ် Font လိုချင်ရင် ဒေါင်းနိုင်အောင်တော့ Download link လေးတစ်ခုပေးထားလိုက်ရင် အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။
43 Re: အကြံပေးတာပါ... [Suggestion & Feedback]